လီဗာပူးကွင်းလယ်လူဟောင်းရဲ့ ယူနိက်တက်အပေါ်ပုတ်ခတ်မှုကို ဘရူနိုဖာနန်ဒက်တုံ့ပြန်ပြီ – FBV SPORT NEWS
လီဗာပူးကွင်းလယ်လူဟောင်းရဲ့ ယူနိက်တက်အပေါ် ပုတ်ခတ်မှုကို ဘရူနိုဖာနန်ဒက်တုံ့ပြန်ပြီ…
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ရဲ့ အရေးကြီးပွဲစဉ်လည်းဖြစ် အနိုင်ပိုင်းရမယ့်ပွဲလည်းဖြစ်တဲ့ ၁၇ ရက်နေ့မှာကစားရမယ့် လီဗာပူးနဲ့ပွဲမတိုင်မီ ယူနိက်တက်အသင်းအား လီဗာပူကွင်းလယ်လူဟောင်း ဂျေဆန်မက်တီးက ရိုင်းပြစွာ ဝေဖန်ခဲ့သည်….
ယင်းကစားသမားသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်ကလည်း ယူနိက်တက်ကစားသမားတချို့နဲ့ အချင်းများပြီး အကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသောကစားသမားဖြစ်ကြောင်း အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးမီဒီယာများက ထောက်ပြခဲ့သလို ဂယ်ရီနဗီးကလည်း ဘောင်မဝင်သော လူသားဟုပြောခဲ့ ဖူးသည်…
ယခုအခါမှာတော့ ယူနိက်တက်ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ဘရူနိုဖာနန်ဒက် က ဂျေဆန်မက်တီးရဲ့စကားကို ပညားသားပါပါ တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ယူနိက်တက်အသင်းအတွက် ယခုလို ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်…
ဘရူနိုက ဖာနန်ဒက် က ” အသင်းကို နေရာမှားရောက်နေတာလား ပြောရအောင် ကျနော်တို့က တကယ်စိတ်နှစ်ပြီး အသင်းအတွက် ကစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ပရိတ်သတ်တွေသိပါတယ်…..သူဒီလို ပြောနေလို့ လာမယ့်ပွဲအတွက် ဘာမှသက်ရောက်မှုမရှိသလို ဘာမှလည်းထိခိုက်မနေပါဘူး….
နောက်တခုပြောချင်တာက ဒီလိုတွေတိုက်ခိုက်နေပြီး ကစားသမားဘဝက နာမည်မကြီးခဲ့တာကို အခုယူနိက်တက်ကို တိုက်ခိုက်ပြီးနာမည်ယူရအောင် လီဗာပူးလ်အသင်းက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မပီသတဲ့ကစားသမားတွေကို ဒီလိုဘဲကြည့်နေတော့မှာလားဆိုတာဘဲမေးချင်ပါတယ်…
သူဘယ်လောက်ဘဲတိုက်ခိုက်ပါစေ ဘာတွေဘဲပြောပြော…..ကျနော်တို့လုပ်စရာရှိတာ အကောင်းဆုံး လုပ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ပြေးလမ်းပေါ်ကိုဆက်လျောက်နေမှာပါ ” ဟု တုံပြန်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်….
Rk(FBV SPort News)